आइओएमले सुरु गर्यो आफ्नै दन्तचिकित्सा शिक्षण अस्पताल – Health Post Nepal
आइओएमले सुरु गर्यो आफ्नै दन्तचिकित्सा शिक्षण अस्पताल
२०७६ असार १६ गते १८:४८
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)अन्तर्गत महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसले आफ्नै दन्तचिकित्सा शिक्षण अस्पताल सुरु गरेको छ । सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाले अस्पतालको उद्घाटन गरेका हुन् ।
यसअघि, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दन्तविभागका रूपमा दाँतसेवा सञ्चालनमा थियो । तर, सीमित सेवाका कारण दाँतको उपचारका लागि आएका बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अस्पतालकै रूपमा दन्तसेवालाई विस्तार गरिएसँगै आब दाँतका बिरामीले सबैखाले सेवा पाउन सक्ने बताइएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा उपकुलपति खनियाले सबैखाले रोगको उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पूर्ण रहेको बताए । खनियाले भने, ‘महाराजगन्ज क्याम्पसले अन्य विधामा जति ख्याति कमाएको छ, दन्तचिकित्साले पनि त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी, आइओएमका डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले पहिला महाराजगन्ज क्याम्पसमा बिडिएस पठन–पाठन कार्यक्रम नभएको हुँदा लज्जाबोध भएको बताए । ‘बिडिएस अध्यापन र दन्तचिकित्सा शिक्षण अस्पताल स्थापनालाई सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको थियो,’ अग्रवालले भने, ‘तर, आज बिडिएस अध्यापन र दन्तचिकित्सा शिक्षण अस्पताल स्थापनाले इतिहास रच्ने काम भएको छ ।’
हाल महाराजगन्ज क्याम्पसमा बिडिएसमा २५ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । अस्पतालमा डेन्टल बेड ३० वटा रहेका छन् । पोर्टेबल एक्स–रे मेसिन ४ वटा छन् । पठन–पाठनका लागि १० जना शिक्षकको दरबन्दी तयार भइसकेको र ११ जनाको विज्ञापन गरिएको दन्तविभागका प्रमुख डा. कृष्ण केसी बताउँछन् ।
केसीका अनुसार अस्पतालमा रहेको पूर्वाधारका आधारमा दैनिक १ सय ५० देखि २ सयसम्म बिरामीलाई उपचारसेवा दिन सकिन्छ ।
अस्पतालले दाँत निकालेबापत प्रतिदाँत १ सय, जरा उपचारका लागि २ हजार, दाँत सफा गराएबापत ५ सय, सिमेन्ट भरेबापत ४ सय रूपैयाँ उपचारशुल्क निर्धारण गरेको छ । अन्य निजी अस्पतालको तुलना ५० प्रतिशत सस्तोमा उपचारसेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालले जनाएको छ ।